> Resource> DVD> Olee otú iji ele PowerPoint ngosi mmịfe on DVD Player
"M bụ onye nkụzi si onye n'etiti School. Nke a izu ụka e nyere m ọrụ nke converting a PowerPoint ngosi mmịfe n'ime a format playable na anyị na ụlọ akwụkwọ ozi ọma ọwa, nke nanị na-eji DVD ezie na a DVD ọkpụkpọ. Olee otú m nwere ike ime nke ahụ?"
"On Ekele Day, anyị, a nnukwu ezinụlọ jide a njikọghachi ebe ga-nza nke photos weere. M mere a PowerPoint ngosi mmịfe na foto ndị a. Ugbu a, m ga-amasị-ezite ya na ndị ikwu m ikiri. Ma ụfọdụ n'ime ha adịghị nwere kọmputa. N'ihi ya, m na-atụle ma ọ bụrụ na m enwe ike ọkụ nke PowerPoint ngosi mmịfe jidesie a DVD otú ha ga-enwe ike na-egwu ya site na DVD ọkpụkpọ? "
Ò nwetụla mgbe ị okosobode nsogbu yiri nke ahụ na gị PPT ngosi? Ọ bụrụ na okwukwe, ebe a bụ ihe ngwọta - site na ichekwa gị PowerPoint ngosi mmịfe jidesie a DVD. Ma, bịanụ, ọ na--agaghị na-na kpọmkwem na anyị nwere ike ime ya niile na PowerPoint software. Ya mere, olee otú anyị pụrụ ime ya, n'ezie?
N'ezie, ihe niile ị chọrọ bụ a PowerPoint ka DVD Ntụgharị nke nwere ike inyere gị aka iji tọghata gị PowerPoint ngosi mmịfe jidesie a DVD ozugbo. N'ezie, e nwekwara ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ na-eme ya. Otú ọ dị, nke a pụrụ ịbụ mfe ma ọ bụ ndị kasị adaba otu. The Wondershare PPT2DVD gị ga-abụ ezigbo ngwá ọrụ. Soro nzọụkwụ n'okpuru na ị ga-enwe na-ele gị PowerPoint on a DVD ọkpụkpọ mfe. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute ugbu a na-ahụ otú ọ ga-dabara na gị PPT mkpa.
1 Wụnye na Import PPT Files
Download na wụnye a PowerPoint ka DVD Ntụgharị. Fanye a ide DVD n'ime kọmputa gị. Pịa Tinye mbubata PowerPoint ngosi mmịfe na ị chọrọ ele na DVD ọkpụkpọ. Ị nwere ike tọghata ruo 12 ngosi faịlụ otu oge na i nwekwara ike ịgbanwe usoro nke faịlụ.
2 Set ntọala gị na PPT
Hazie TV ọkọlọtọ na akụkụ ruru ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji aka ịnyagharịa gị PowerPoint slideshows n'oge ebre, ị pụrụ nanị pịa Kwado ntuziaka mode.
3 Mepụta a DVD NchNhr
Họrọ na ike a siri DVD menu n'ihi na gị PowerPoint ngosi mmịfe. E nwere ihe ịtụnanya 47 wuru na-nhọrọ nke ọma e DVD menu ndebiri, nke na-aghaghị na-enye gị elu larịị nke customization mgbe na-abịa dị iche iche mkpa. The menu ndebiri na-n'ihu categorized n'okpuru anọ bụ isi dị iche iche; azụmahịa, ememe, agụmakwụkwọ na okike.
4 tọghata PPT ka DVD
Ugbu a ị na-abịa ikpeazụ nzọụkwụ nke converting na PowerPoint ka DVD. Ị na-adịghị na-echegbu onwe ma ọ bụrụ na e nweghị DVD burner na kọmputa gị, ndị wuru na-DVD burner na a usoro pụrụ inyere gị aka rụchaa akakabarede usoro-akpaghị aka.
Ugbu a ọ na-mere na dusted! Ị nwere ike na-ele gị PowerPoint ngosi mmịfe on DVD ọkpụkpọ na DVD diski ozugbo. Ọ bụ njikere maka nkekọrịta ma ọ bụ ị na-elele na ma a ezinụlọ PowerPoint ngosi mmịfe, agụmakwụkwọ ngosi mmịfe ma ọ bụ azụmahịa ngosi mmịfe; PPT2DVD nwere ike inyere gị ịkọrọ ha kpam kpam. Mmasị na obi ụtọ n'otu oge? Malite ị na-elele na gị onwe gị PowerPoint ngosi mmịfe na DVD ọkpụkpọ kwa!
Embed YouTube Video na PPT na tọghata PPT ka YouTube Video
Olee otú iji tọghata Windows Movie Onye kere ka DVD - Ọkụ WMV ka DVD
Top 10 Disney DVD Adabara Kids
Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ VOB? Ngwọta
Olee otú Ọkụ a DVDRip File ka DVD